28 maalmood: Maalinta 1aad – Akhbaarta Wanaagsan
maqal iyo muuqaal fasiix ah ku saabsan Injiilka Ciise Masiix
Akhbaarta Wanaagsan Facebook page
Akhbaarta Wanagsan Youtube channel
28 maalmood: Maalinta 1aad
Posted on January 29, 2020 May 25, 2020 by Maroodiga
MAALINTA 1-AAD: Akhri Matayos cutubka koowaad.
Laga yaabee inay adiga aad kuugu adag tahay inaad akhridid aayadaha 1 ilaa 17, laakiinse ha joojin. Akhrintu way sahlanaan doontaa aayadda 17 kaddib. Matayos wuxuu ku bilaabayaa inuu taxo dadkii Ciise ka soo farcamay ama awooweyaashiisii hore. Magacyada badankooda maynu maqal waana magacyo ay adag tahay in lagu dhawaaqo. Markaa, muxuu qoraha injiilku halkaas ugaga bilaabayaa? Si uu u tuso inuu Ciise ka soo jeedo ama ka dhashay reer ay abtirsiinyahiisa ku jiraan laba qof oo muhiim ahi kuwaas oo ay hubaal tahay inaad garatid: Ibraahim, saaxiibkii Ilaahay, iyo Boqor Daa’uud, oo ah kii qoray Sabuuro badan.
Ciise wuxuu ka soo farcamay Ibraahim. Tani waa muhiim waayo Ilaahay ayaa Ibraahim ugu ballanqaaday inuu ka dadyowga adduunka oo dhan barakayn doonaa isaga ka imaan doono. (Eeg Bilowgii 22:18.) Kuwa Ciise aaminsani waxay rumaysan yihiin inuu isagu waxyigaas buuxiyey. Akhbaarka Injiilka ayaa si cad u tusaya inuu Ilaahay soo diray Ciise si uu barakooyin u siiyo dadka adduunka oo dhan. (Eeg Galatiya 3:14.)
Sidoo kale wuxuu Ciise ka soo farcamay Boqor Daa’uud. Ilaahay ayaa Daa’uud ugu ballanqaaday inuu mid isaga reerkiisa ka dhalan doonaa weligiis sidii boqor u talin doono. Wacdiskii ugu horreeyey ee Butros ayaa ku dhawaaqaya inuu Ciise yahay boqor. (Eeg Falimaha Rasuullada 2:22-36.) Mowduuca Injiilka udub-dhexaadka u ahi waa in marka aad idiguna boqorka isu dhiibtid, aad boqortooyada Ilaahay qayb ka noqon kartid. Ciise waxaa caadiyan loogu yeedhaa “Masiix” (eg aayadda 1); tani waa darajo khaas ah oo ku saabsan boqorka uu Ilaahay ballanqaaday inuu innaga ina siiyo.
Inta kale ee cutubku waxay sheegeysaa wax ku saabsan dhalashadii Ciise. Magaca hooyadiis waxaa la odhan jirey Maryan, oo iyadu bikrad bay ahayd ilaa iyo intii uu isagu ka dhalanayey. Ka dhalashada bikradu waxay u eg tahay mid aan suurtogal ahayn. Taasina waxay ku dhacday waayo waxaynu innagu ognahay inaanay suurtogal ahayn inayn waxyaalo noocaas oo kale ahi dhacaan, iyaga oo awoodda Ilaahay ku dhaca mooyaane. Tani taariikhda hal mar uun bay ka dhacday. Sidii Aadan oo kale, isagu Aabbe adduun ama bini’aadan ah muu lahay, laakiinse Yuusuf ayaa Ciise sidii cunuggiisii oo kale u qaatay ama u soo koriyey. Aadan wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey; Ciise wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee nooc cusub oo bini’aadanimo kuwaas oo aad adigu ka mid noqon kartid ama ku biiri kartid. Noocan cusub ee bini’aadanimo jidh ahaan tii hore kama duwana; laakiinse ruuxiyan ayay kaga duwan tahay. Ciise wuxuu dib inoogu soo celinayaa Ilaahay si aynu ugu noolaano sidii carruurtii Ilaahay. Waa sababtaa ta isaga loogu yeedho “Aadan-kii ugu dambeeyey.” (Eeg 1 Korintos 15:45.)
Muhiimadda magaca “Ciise” waxaa lagu sharaxay ayaadda 21. Af-Cibraaniga magaciisu waa Jehoshua, oo macnihiisu yahay “Rabbigu waa badbaado.” Rabbiga Ilaaha ah ayaa Ciise soo diray si uu innaga inooga badbaadiyo cawaaqibaadka dembigeena (ficilladeena ama dabeecadaheena khaldan.)
Aayad ay tahay in la xasuusto—”Oo waxay umuli doontaa wiil, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, waayo, dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa.” (Matayos 1:21)
Duco—Rabbiyow, adigu waad og tahay inaan badanaa dembaabo (oo aan khalad galo), xataa marka aan doonayo inaan wax wanaagsan sameeyo. Fadlan naxariistaada aawadeed iga saamax ficilladayda khaldan oo maanta igu rid wadada saxda ah. Oo inta aan Injiilka baranayo igu caawi inaan fahmo ka uu Ciise yahay iyo wixii uu aniga ii sameeyey. Noloshaydu ha noqoto sida aad adigu la dooneyso. Aamiin.
Posted in 28 days with Matthew, LecturesTagged biblestudy, book, new testament
Videoga ugu dambeeyey
dhimashadda iyo sarakicidda
28 Maalmood: Maalinta 3aad
28 Maalmood: Maalinta 2aad
Ilaahay na caawi
Copyright © 2021 Akhbaarta Wanaagsan – OnePress theme by FameThemes